Wafdi Baladweyne u tegay xalinta xiisada ka taagan
Tuesday July 09, 2019 - 15:14:15 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Magalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan waxaa gaaray wafdi uu hoggaaminayo Gudoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Hir-Shabeelle Cusmaan Barre Maxamed oo maalmahaan ku sugnaa Magalada muqdisho.
Garoonka diyaaradaha Magaalada Baladweyne waxaa ku soo dhaweeyay guddoomiyaha iyo wafdigiisa, Xildhibaano, Wasiiro ka tirsan Maamulka Hir-Shabeelle iyo qaar ka mid ah mas’uuliyiinta Maamulka gobolka Hiiraan.
U jeedka safarka guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Hir-Shabeelle ayaa lagu sheegay xalinta xiisada u dhaxeysa Madaxweynaha Maamulka Hir-Shabeelle iyo gudoomiyihii xilka laga qaaday balse diiday ee Gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar (Dabageed).
Gudoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Hir-Shabeelle Cusmaan Barre Maxamed ayaa la filayaa in uu si kala gooni gooni ah in uu ula kulmo Madaxweynaha Maamulka Hir-Shabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo Yuusuf Axmed Hagar (Dabageed).
Xildhibanao iyo Wasiiro ka tirsan Xukuumadda Soomaaliya ayaa horay Baladw3eyne u tegay kuwaas oo ku guuleysan waayay xalintax siisadaas,waxaana xusid mudan in mudo bil iyo dhowr cisho ah aysan wax Shaqo ah ka socon Xarumaha Maamulka Gobolka Hiiraan.